कदापी हार नमान्ने यी तिन शक्तिशाली राशिहरु ! जानी राखौ « Online Tv Nepal
कदापी हार नमान्ने यी तिन शक्तिशाली राशिहरु ! जानी राखौ
Published : 31 March, 2020 11:38 am
आफुले गरेको काममा जोकोहीले पनि सफलता हाँसिल गर्न चाहन्छन्, तर सफल तिनिहरु मात्र हुन्छन जोसंग निश्चित संकल्प र आत्मविश्वास हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रअनुसार जसको कुण्डलीमा तीन ग्रह शुभ स्थितिमा रहने गर्दछन्, उनीहरुलाई कुनैपनि काममा निराशा प्राप्त हुदैन ।ति तिन राशी हुन्: शनि, मंगल र बृहस्पति। पहिलो शुभ मानिने ग्रह हो शनि, यस ग्रहको कुण्डलीमा शुभ स्थितिमा भए भाग्यले सधै साथ दिने ज्योतिषशास्त्रले बताउँछ। दोस्रो र तेस्रो ग्रह हुन मंगल र बृहस्पति। यी दिनहरुमा शुभ स्थिति व्यक्तिलाई सधै सफलता प्राप्त हुने गर्दछ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार १२ राशिहरुमध्ये ३ राशि यस्त हुन्छन् जो कुनैपनि अवस्थामा हार मान्दैनन् । हार नमान्नुका कारण नै यी तीन राशिहरु धन, सुख-समृद्धि र आफ्नो जीवनमा प्रतिष्ठा बनाउनमा सधै सफल रहने गर्दछन् ।
के-के हुन् त ति तीन राशिहरु?
मेष राशि हुने व्यक्ति आफ्नो नेतृत्व क्षमताको कारण सधै आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल रहने गर्दछ। यी मानिसहरु आफ्नो बौद्धिक क्षमता र आत्मविश्वासको बलमा हरेक काममा सफलता प्राप्त गर्ने गर्दछन् । साथै यी व्यक्तिहरु राम्रो नेता र चर्चित वैज्ञानिक हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ।
धनु राशि भएका व्यक्तिहरु आफ्नो हरेक काममा सफलता पाउनको लागी ठुलै क्रान्तिकारी निर्णय लिने गर्दछन् । यस राशिका मानिसहरु ठुलो भन्दा ठुलो निर्णय तुरुन्त नै लिने गर्दछन् । आफ्नो कामलाई सफल बनाउनको लागी ज्यान दिएर मिहिनेत गर्ने गर्दछन् भने यस राशिको व्यक्तिहरु निकै नै अनुशासित हुने गर्दछन् । निश्चित समयमा नै आफ्नो काम पूरा गरि सफलता प्राप्त गर्ने गर्दछन् ।
यो राशिका व्यक्तिहरु आफ्नो क्षमताको कारण उच्च पद हाँसिल गर्न सफल हुने गर्छन्। शनि र मंगलको विशेष कृपा रहने हुनाले यस राशिको व्यक्तिहरु आफ्नो मिहिनेतको कारण धन, मान-सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नमा सफल हुने गर्दछन्। यस राशिको व्यक्तिहरु जुन कामको पछाडि लाग्दछन् त्यसलाई पूरा गर्नको लागि पुरै मिहिनेत गर्ने गर्दछन् । यिनीहरुको यही खूबी नै सबैभन्दा ठुलो पुंजी हुन्छ।